Akụkọ - Light initiator
N'ime sistemu foto, gụnyere UV gluu, mkpuchi UV, ink UV, wdg, mgbanwe kemịkal na-eme mgbe ịnata ma ọ bụ na-adọrọ ike mpụga, wee banye n'ime radicals ma ọ bụ cations n'efu, si otú a na-ebute mmeghachi omume polymerization.
Ndị na-ese foto bụ ihe ndị nwere ike mepụta ihe na-akpata nnwere onwe ma malitekwa ịmalite polymerization site na ọkụ.Mgbe ụfọdụ monomers na-enwu gbaa, ha na-etinye photon ma mepụta steeti nwere obi ụtọ M: M + HV → M *;
Mgbe mmekorita nke molekul a na-arụ ọrụ, a na-emepụta M * → R · + R 'a na-agbanwe agbanwe, mgbe ahụ, a na-amalite monomer polymerization iji mepụta polymer.
Teknụzụ na-ekpo ọkụ radiesị bụ teknụzụ nchekwa nchekwa ọkụ na nchekwa gburugburu ebe obibi, nke ọkụ ọkụ ọkụ (UV), elektrọn (EB), ọkụ infrared, ìhè a na-ahụ anya, laser, chemical fluorescence, wdg, na-ezute "5E" n'ụzọ zuru ezu. Njirimara: Oru oma, Enyere, Ego, Nchekwa Ike, na Enyi na Enyi. Ya mere, akpọrọ ya "Green Technology".
Photoinitiator bụ otu n'ime ihe dị mkpa dị mkpa nke nrapado photocurable, nke na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịgwọ ọrịa.
Mgbe igwefoto na-enwu ọkụ site na ọkụ ultraviolet, ọ na-etinye ike nke ọkụ ma kewaa abụọ na-arụ ọrụ n'efu, nke na-ebute polymerization yinye nke resin na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, na-eme ka nrapado obe jikọọ ma sie ike. Onye na - ese foto nwere njirimara ngwa ngwa, nchekwa gburugburu ya na nchekwa ọkụ.
Mkpụrụ ndụ ndị nwere ike ịmalite ọkụ na mpaghara ultraviolet (250 ~ 400 nm) ma ọ bụ mpaghara a na-ahụ anya (400 ~ 800 nm). Mgbe ịmịchara ọkụ ọkụ ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi, mkpụrụ ndụ ndị mbido si na steeti gafere na steeti singlet na-atọ ụtọ, wee gazie steeti atọ nwere ọ excitedụ site na ntụgharị usoro.
Mgbe otu singlet ma ọ bụ okpukpu atọ na-enwe obi ụtọ site na mmeghachi omume monomolecular ma ọ bụ bimolecular, mpekere ndị na-arụ ọrụ nke nwere ike ibute monomer polymerization nwere ike ịbụ ihe na-enweghị nnwere onwe, cations, anions, wdg.
Dịka usoro nnabata dị iche iche si dị, a ga-ekewa ndị na - eme ihe nkiri na ndị na - ahụ maka ihe nkiri na - eme ihe na - eme ihe na - eme ihe na - eme ihe, nke a na - ejikwa ya eme ihe.